I-china abakhiqizi be-Polymer Polyol LHS-100 nabaphakeli | Longhua
I-Polymer polyol LHS-100 inokuqukethwe okuqinile okungama-45% amakhemikhali ajwayelekile we-polymeric polyol. Ikhiqizwa kusuka kuma-polyether polyols asebenza kakhulu, i-styrene, i-acrylonitrile njll.
I-LHS-100 enempahla ezinzile, esebenza kalula, evumelana nokwakheka okuhlukile.
I-LHS-100 ngumkhiqizo we-viscosity ophansi, awubi yi-viscous ngemuva kokungeza amanzi nokunyakaza.
I-1 Inani lokusetha kokuqukethwe okuqinile (50 ± 2)%, futhi imikhiqizo ye-foam inokusebenza okuhle kakhulu kokuqina nokubhidliza ngaphansi kwesisekelo sobunzima bobabili; imikhiqizo ye-foam ayonakalanga futhi ishintsha umbala ngemuva kokushiswa ngo-220 ℃ ngeminithi elingu-1.
Umkhiqizo uzinzile futhi unokusebenza okuhle, okunganciphisa inani lamafutha abicah engezwe kwifomula
Umkhiqizo une-viscosity ephansi futhi awubi yi-viscous lapho uthintana namanzi. Imikhiqizo yama-foam inama-pores acocekile futhi afanayo, ama-gradient we-density ephansi phezulu nangaphansi, nesikhumba sangaphansi esincanyana.
Umbala womkhiqizo we-foam umhlophe ngokwedlulele, futhi uma kufakwa i-paddle enemibala, ukuvuselelwa kwesipanji kungathuthukiswa.
Imikhiqizo ye-5.Foam ine-VOC ephansi ngokweqile, ehlangabezana nezidingo ezinephunga eliphansi lezipanji ezisezingeni eliphakeme.
I-polymer yethu umkhiqizos zisebenza kalula futhi zidinga izinguquko ezincane zokwakhiwa kwe-foam, okuyi inzuzo ye ukukhiqizwa okukhulu kwesiponji; I-viscosity yemikhiqizo i- okuphansi futhi don't iba viscous ngemuva kokungeza amanzi futhi ngesikhathi enyakazayo, evumela izinto ukuthi zixubeke ngokulinganayo, ngakho-ke ama-prodoucts wokugcina’ amangqamuzana esiponji afanayo futhi ahlelekile, i-gradient of density iphansi; Tyena umkhiqizo ukubukeka kunjalo emhlophe emsulwa ne-VOC ephansi ngokweqile, ehlangabezana nezidingo zemakethe yefenisha ephezulu.
I-Polymer polyol LHS-100 isetshenziswa kanye nama-polyols ajwayelekile, njenge-LEP-5631D, LEP-335D ukukhiqiza amagwebu aguquguqukayo e-polyurethane, anjenge: igwebu lesigaxa, isipanji, amakhushini, izihlalo, umatilasi, ifenisha ephakanyisiwe, izinto zokugqoka, izinto zezicathulo, ukhaphethi phansi, izinto zokupakisha nezinye izinhlelo zokusebenza eziningi.
Langaphambilini Polymer Polyol LHS-50
Olandelayo: Polymer Polyol LHS-200
Okujwayelekile NePolymeric Polyol
I-Polymeric Polyol 25%
I-Polyether Polyol LE-305